Inona no Vaovao ao amin'ny iOS 15.1 | Vaovao iPhone
Araka ny nambaran'i Apple tamin'ny herinandro lasa, ny fanavaozana lehibe voalohany amin'ny iOS 15, iOS 15.1, dia navoaka omaly tolakandro (ora espaniola), fanavaozana tonga miaraka ny sasany amin'ireo endri-javatra andrasana indrindra fa tsy nampidirin'i Apple tamin'ny dikan-teny farany an'ity dikan-teny ity sy ny sasany tamin'ireo izay nahatratra ny iPhone 13 vaovao.
Raha tianao izany fantaro ny vaovao rehetra izay efa azo alaina amin'ny iOS 15.1 sy iPadOS 15.1 rehefa avy nanavao ny kinova farany efa misy, dia manasa anao aho hanohy hamaky.
3 Fampiasa macro
4 IPhone 12 fanatsarana ny fitantanana bateria
5 HomePod dia manohana ny Lossless Audio sy Dolby Atmos
6 App App
7 Lahatsoratra mivantana amin'ny iPad
9 Karatra fanaovana vaksiny ao amin'ny Wallet
10 Fanamboarana bibikely
11 Azo alaina izao ny MacOS 15 Monterey
SharePlay dia fiasa natao ho an'ny ahafahan'ny olona mifandray akaiky kokoa Misaotra an'i FaceTime, fiasa nateraky ny filan'ny valan'aretina coronavirus mba hifandraisana hatrany amin'ny namantsika sy ny fianakaviantsika.
Ity endri-javatra ity dia mamela ny mpandray anjara ho mpandray anjara milalao mozika, andian-tantara ary sarimihetsika miaraka ary dia maneho hevitra momba izany toy ny hoe miaraka amin'ny efitra iray ihany izy ireo.
Ankoatr'izay dia mamela ihany koa zarao amin'olon-kafa ny efijery iPhone, iPad na Mac anao, endri-javatra mety tsara hanomanana dia, hangout miaraka amin'ny namana, hanampiana olona iray hametraka na hamaha olana ny fitaovanao.
Miaraka amin'ny fampidirana ny isan'ny iPhone 13, Apple dia nanolotra safidy horonantsary vaovao antsoina hoe ProRes, a endrika firaketana video ampiasaina amin'ny fandraketam-peo matihanina izay manome fahatokiana miloko avo kokoa sy famatrarana horonan-tsary ambany kokoa, hany ka tsy dia misy antsipiriany very.
Ity asa ity tsy misy afa-tsy amin'ny iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max, ireo mpampiasa izay tsy afaka mirakitra fotsiny, fa manova sy mizara ireo horonan-tsary noforonina avy amin'ny fitaovany ihany koa. Ity fiasa ity dia hita ao amin'ny fakan-tsary - Formats - ProRes fampiharana.
Raha tianao izany firaketana amin'ny 4K amin'ny 30 fps, mila iPhone 13 Pro amin'ny 256 GB na ambony ianao, satria ao amin'ny modely fitahirizana 128 GB, Ity fiasa ity dia voafetra ho 1080 amin'ny 60 fps. Izany dia satria, araka ny filazan'i Apple, iray minitra amin'ny horonan-tsary ao amin'ny 10-bit HDR ProRes dia maka 1.7 GB amin'ny HD mode ary 6 GB amin'ny 4K.
Ny iray amin'ireo fiasa vaovao azo alaina amin'ny alàlan'ny fakantsarin'ny iPhone vaovao miaraka amin'ny iOS 15.1 dia ny macro. Miaraka amin'ny iOS 15.1, Apple dia nampiditra switch esory ny auto macro.
Rehefa tapaka ny fampiharana Camera dia tsy hiova ho azy ho miadana Ultra Wide Angle ho an'ny sary sy horonan-tsary macro. Ity fiasa vaovao ity dia hita ao amin'ny Settings - Camera.
IPhone 12 fanatsarana ny fitantanana bateria
iOS 15.1 dia nampiditra algorithm vaovao hahafantarana ny tena toetry ny bateria, algorithm izay manolotra a tombanana tsara indrindra amin'ny fahafahan'ny bateria rehefa mandeha ny fotoana amin'ny iPhone 12.
HomePod dia manohana ny Lossless Audio sy Dolby Atmos
Tsy ny iPhone ihany no nahazo vaovao manan-danja tamin'ny iOS 15.1, satria ny HomePod dia nanavao ny rindrambaiko ho 15.1 ihany koa, manampy feo tsy misy very sy fanohanana Dolby Atmos miaraka amin'ny feo spatial.
Mba hahafahan'ity fiasa vaovao ity dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny fampiharana Home.
Nampiana automatique vaovao mifototra amin'ny famakiana avy amin'ny jiro mifanaraka amin'ny HomeKit, kalitaon'ny rivotra na sensor haavon'ny hamandoana.
Lahatsoratra mivantana amin'ny iPad
Ny asan'ny fanekena lahatsoratra, Live Text, azo alaina amin'ny alàlan'ny fakan-tsary amin'ny iPhone, dia hita ao amin'ny iPadOS 15 ihany koa, endri-javatra ahafahanao mamantatra lahatsoratra, laharan-telefaona, adiresy ...
Ity endri-javatra ity dia hita amin'ny iPads miaraka amin'ny A12 Bionic processeur na ambony.
Nampiana hetsika vaovao efa voalahatra izay mamela antsika hametraka lahatsoratra amin'ny sary na rakitra amin'ny endrika GIF.
Karatra fanaovana vaksiny ao amin'ny Wallet
Ireo mpampiasa nahazo ny vaksiny COVID-19 dia afaka mampiasa ny fampiharana Wallet mba mitahiry ary mamorona karatra fanaovana vaksiny izay azo aseho na aiza na aiza ilàna azy tsy mila mitondra taratasy fanamarinana ara-batana.
Io dia miasa amin'izao fotoana izao any amin'ny fanjakana sasany any Etazonia ihany no misy azy io.
Namboarina ny olana nasehon'ny fampiharana Photos rehefa diso fampisehoana fa feno ny fitahirizana rehefa nanafatra horonan-tsary sy sary.
Ny olana nitranga rehefa nilalao audio avy amin'ny fampiharana izay afaka miato rehefa manidy ny efijery.
Miaraka amin'ny iOS 15.1 dia namaha ny olana ihany koa izany tsy namela ny fitaovana hamantatra tambajotra Wi-Fi misy.
Azo alaina izao ny MacOS 15 Monterey
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 15.1, Apple dia namoaka ny macOS Monterey version farany, dikan-teny vaovao izay mampiditra ny sasany amin'ireo endri-javatra izay hita amin'ny iOS ihany koa toy ny SharePlay.
Amin'izao fotoana izao, ny asa Fanaraha-maso manerantany, fiasa izay ahafahanao manitatra ny fanaraha-maso avy amin'ny Mac mankany amin'ny iPad, dia tsy misy fa ho tonga amin'ny herinandro ho avy, araka ny filazan'i Apple andro vitsy lasa izay.
macOS Monterey tonga soa Shortcuts, ny fomba mivaingana ary ny fanavaozana Safari an'ny iOS 15. Ity kinova vaovao ity dia mifanaraka amin'ny solosaina mitovy amin'ny macOS Big Sur.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Inona no vaovao ao amin'ny iOS 15.1
Apple Fitness + sy Apple One Premiere azo alaina manomboka amin'ny herinandro ho avy